Badhasaabka Ceeri-gaabo maamul xumida doqon niimada ayuu kaga daray by Abdi Mustafe‏
Badhasaabka Ceeri-gaabo maamul xumida doqon niimada ayuu kaga daray by Abdi Mustafe‏ 0 July 31, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 642
Badhasaabka Ceeri-gaabo maamul xumida doqon niimada ayuu kaga daray by Abdi Mustafe‏ Badhasaabka
Falaymaalin tii uu Ceerigaabo yimi ilaa maalin kaa maanta ah wuu degi la'yay gobolkuoo xitaa saraakiil baa lagu dilay dawo dhiig joojin ahna looga waayay cusbitaal ka. Falay dhan gar buu ka leeyey oo wuxuu ogyay shaqa la,aanta ku soo socota marka Waddani xukunka ku guuleysto hase yeeshee
Badhasaabkanoo day-day nimadadoqon niimo kaga daray ayaa Silaanyo naxil kan u dhiibtay dabeedna waakaa wejiga ka cadiiray ee Silaanyo yidhi ha odhan midhkaa markuu Falay danaaniyey sida dameeraha ee goob Silaanyo fadhiyo ka yidhi
ma Ciro ayaynnu dooranaa ee dadkina uugu jawaabeen HAA HAA. Badhasaab cidii ka dhigtay ayaa gar darada iska le oo waa Silaanyo oo weliba halkuu soo magacaabi lahaa nin jilibka Muse Abokorka soo jeedaileyn iyagaa jidaa dega e, ogaan u soo diray nin Silaanyo ay isku jilib yihiin
oo ah Mohamed Abokor. Wax ka guro hadaba waakaa hadaladii kaambaynka ku
dhawaaqay ee Silaanyo iyo madaxdii la socotayba ay khajileen markii dadki wada yidhaah deen HAA HAA. Falay oo Burco gaajo beerka u jiifa ayaa habeen qudha la yidhi sarakac waxaad tahay badhasaabka Ceerigaabo e. Yaa salaam .... Falay mudo yar baa shaqadan kaaga hadhay ee bulqaas oo badhaaci intaad doonto ileyn teneg madhan baa
tahay e. Kuna seexo oo ku soo toos A/rahman Ciro waa ninka Silaanyo kursiga kala wareegaya adna halkaad ku danbaynayso waad is ogtay.
Abdi Mustafe No Comments yet... Print
20/04/2017 - 09:28:04
Dadweynaha Magaalada boorama ayaa laba maalmood oo xidhiidha mudaraadyo sameeyay kaasi oo ay kaga soo horjeedaan dawlada hoose ee Boorama
19/04/2017 - 18:28:26